Safidy fitsangatsanganana vaovao: Miampita ny sisintany manosika trolley an-dalamby
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Safidy fitsangatsanganana vaovao: Miampita ny sisintany manosika trolley an-dalamby
Tsy mila lasantsy, tsy mila herinaratra na etona. Ity endrika fitaterana ity dia sariaka amin'ny tontolo iainana ary lasa mpandeha ny mpandeha.
Ny fitsangatsanganana iraisampirenena izao dia mitaky fanosehana trolley an-dalamby amin'ny lalana tsy misy olona hivoahana amin'ny firenena.
I Korea Avaratra, ilay toerana itodiana an'i Russia, no firenena.
Nisy diplomaty Rosiana 8 naharitra adiny valo vao natosiky ny tanana ny trolie-ny fonosana ary ny zanakao nody tany amin'ny Reny Reny.
Ny governemanta Koreana Avaratra dia nanidy ny sisin-taniny noho ny sidina COVID-19 sy iraisam-pirenena, anisan'izany ny Air Koryo eo anelanelan'ny Vladivostok sy Pyongyang dia naato taloha kelin'izay.
Tao amin'ny tranonkalany, ny Masoivoho Rosiana dia nidera ny fifandraisany tsara amin'ny Repoblika Demokratikan'i Korea, fantatra amin'ny anarana hoe Korea Avaratra tamin'ny filazany:
Ny DPRK dia mpiara-miasa maharitra amintsika. Ireo fomban-drazana feno finamanana sy fiaraha-miasa niorina nandritra ny vanim-potoanan'ny ady dia nanome fototra azo antoka hanamafisana sy hampivelarana ny fifandraisana eo amin'i Moskoa sy Pyongyang. Tombontsoa ho anay indrindra ny manome antoka fa ny saikinosy Koreana manamorona ny faritra atsinananay dia zana-tany manodidina ny fiaraha-monina tsara ary fiaraha-miasa mahasoa.
Araka ny tatitra iray momba ny CNN, nilaza ny masoivoho rosiana tao amin'ny pejy Facebook voamarina. fa ny dia nanomboka tamin'ny lamasinina.
Nandany 32 ora ny Rosiana tamin'ny dia nitetezana ny rafitry ny lalamby taloha any Korea Avaratra, tsy dia voakarakara tsara ary malaza ratsy. Nandeha bisy nandritra ny adiny roa izy ireo avy eo nankany amin'ny sisin-tany, izay ilain'ny fianakaviana manafatra troliaran-dalamby ho an'ny valiziny ary manosika azy io amin'ny lalana rehetra.
Trolley iray, fantatra ihany koa amin'ny sarety tarihin-tanana, dia karazana fiara an-dalamby nalaza tamin'ny taona 1800 izay ampandehanan'ny mpandeha azy amin'ny alàlan'ny fampiasana paompy paompy, na ataon'ny olona manosika ny fiara avy ao aoriana.
Araka ny filazan'ny CNN, ny masoivoho dia namoaka sary roa an'ny sekretera fahatelo Vladislav Sorokin nanosika ny fianakaviany sy ny entany teny amoron'ireo lalamby rehefa nanao akanjo ririnina matevina. Ny zandriny indrindra amin'ny ekipa dia Varya, zanakavavin'i Sorokin, 3 taona. Sorokin dia tsy maintsy nanosika ny sarety tarihin-tanana nandritra ny iray kilaometatra (0.6 miles), ary ny ampahany tamin'izany dia nisy tetezana iray namakivaky ny renirano Tumen nanasaraka an'i Russia sy Korea Avaratra.
Raha vantany vao tonga tao amin'ny gara Khasan ny fianakaviana, dia nifanena taminy ny mpiara-miasa ao amin'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny izay nanampy azy ireo ho tonga amin'ny seranam-piaramanidina ao Vladivostok.
Ny sidina eo anelanelan'ny Vladivostok sy Moskoa dia miasa.
Ny sekretera jeneralin'ny ICAO izay voatendry dia lehilahy marina amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety